दुई वर्षाको सम्बन्ध बिग्रकै हो त ? बकम्फुेस्से राजाको अफर के गर्लान् ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV दुई वर्षाको सम्बन्ध बिग्रकै हो त ? बकम्फुेस्से राजाको अफर के गर्लान् ? | Sagarmatha TV
दुई वर्षाको सम्बन्ध बिग्रकै हो त ? बकम्फुेस्से राजाको अफर के गर्लान् ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरुबीच विभिन्न कुराले रिस राग तथा मनमुटाव भएर पानी बाराबारको स्थितिसम्म पुगेका खबरले बेलाबखत चर्चा पाउने गरेका छन् । यस्तैमा पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रका दुई स्थापित नायिका वर्षा राउत र वर्षा सिवाकोटीको सम्बन्धका विषयमा पनि अनेकथरी हल्ला बाहिर आए । उनीहरुबीच शीतयुद्ध झै चलिरहेको छ ।
प्रतिस्पर्धी अभिनेत्री मानिने दुई बर्षाको दुई फिल्ममा भएको ‘इन र आउट’ को खेलले अहिले दुबैबीचको सम्बन्धमा चिसोपना रहेको स्पष्ट हुन्छ । यो चिसोपना हटाउने प्रयासमा सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदी लागिरहेका छन् । उनीहरुबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध जेसुकै होस्, दर्शकले उनीहरुलाई कलाकारका रुपमा चिन्दछन् । त्यसैले कलाकार भएपछि अभिनय गर्नुपर्छ सँगै होस् या फरक फरक चलचित्रमा नै किन नहोस् । सञ्चारकर्मी सुवेदीले यी दुई अभिनेत्री लिएर ‘बकम्फुसे राजा’ बनाउने भन्दै दुवै अभिनेत्रीलाई अफर गरेका छन् ।
तर, दुबै अभिनेत्रीहरुले भने चलचित्रका लागि कुनै जवाफ दिएका छैनन् । यसको मतलव उनीहरु फिल्ममा अनुबन्ध भने भइसकेका छैनन् । ‘सँगै सुतेपछि गोडा लाग्छ’ भन्ने चर्चित नेपाली उखानलाई यी दुवै अभिनेत्रीले बुझ्नु जरुरी छ । रिस–राग र मनमुटावले कसैको भलो हुँदैन र माथि पु¥याउने पनि होइन यसतर्फ पनि उनीहरु सचेत हुनु जरुरी छ । एउटा आगो बन्दा अर्को पानी बन्नैपर्छ भन्ने सुवेदीको भनाइ छ । त्यसैले भए पनि यी दुवै अभिनेत्रीलाई लिएर आफूले चलचित्र बकम्फुसे राजा बनाउन लागेको बताए ।
फिल्म ‘मेरो पैसा खोई ?’ बाट यी दुई वर्षाबीच दुश्मनीको सुरुवात भएको थियो । अभिनेत्री राउतले उक्त फिल्म साइन गरेपछि अर्की अभिनेत्री सिवाकोटीले हात झिकेकी थिइन् । हालै ‘पशुपतिप्रसाद’ फेम्ड अभिनेत्रीले साइन गरेको फिल्म ‘गोपी’ छाडिन् । फिल्मबाट विदा भएको २४ घण्टामा उनकै ठाउँमा अभिनेत्री राउत भित्रिइन् ।
एक अन्तर्वार्तामा सिवाकोटीले आफूले फिल्म छाड्दा अरुले काम पाएको भन्दै राउतमाथि व्यंग्य गरेकी थिइन् । राउतले व्यंग्यको उत्तर ‘धन्यवाद’ मा फर्काइन् । यसरी उनीहरुबीच सांकेतिक प्रहार जारी रहेको भए पनि उनीहरुको वास्तविक द्वन्द्व के हो उनीहरुलाई नै थाहा होला । दुई बर्षाको टकराव झन चरम अवस्थामा पुगेका बेला सञ्चारकर्मी सुवेदीले उनीहरुलाई नै लिएर चलचित्र निर्माण गर्ने जनाएपछि को इन हुने हुन अथवा को आउट हुनेहुन् भन्ने हल्ला पनि चलचित्रवृत्तमा चल्न थालेको छ । यस विषमा सञ्चारकर्मी सुवेदीले भने– ‘दुई बर्षालाई फिल्म अफर गरिएको सत्य हो तर अझै फाइनल भएको छैन र कोही ‘इन र आइट’ भएका छैनन् ।’
उनका अनुसार, अर्को हप्ताभित्र कलाकारको टुंगो लाग्ने छ । सुवेदी फिल्मसको ब्यानरमा बन्ने कमेडी जनराको यस ‘बकम्फुसे राजा’ मा गणेश सुवेदीको लगानी रहनेछ । विष्णु कल्पितले खिच्ने फिल्मका गीतमा अर्जुन पोखरेलले संगीत भर्नेछन् ।